यी हुन् बलिउडका सुपरस्टार पिताका सुपरफ्लप सन्तानहरु – Medianp
यी हुन् बलिउडका सुपरस्टार पिताका सुपरफ्लप सन्तानहरु
मिडिया एनपीप्रकाशित मिति: शनिबार, बैशाख ०१, २०७५०९:५२0
एजेन्सी, बलिउडमा जम्न ‘गड फादर’ आवश्यक मानिन्छ। यदी पितानै बलिउडका सुपरस्टार छन् भने त बलिउडमा पाइला टेक्न सजिलो हुने भइहाल्यो। तर घरबाटै ठिलो सहयोग पाउँदा पनि सबैले सफलता हासिल गर्न सकेका छन्। यस्ता पनि अभिनेता छन् जसका पिता सुपरस्टार छन्, यसका बाबजदु उनीहरु सफल हुन सकेका छैनन्।
सुपरस्टार अमिताभ बच्चनका छोरा अभिषेक बच्चनले सन २००० मा चलचित्र ‘रिफ्युजी’बाट बलिउडमा पाइला टेकेका थिए। तर यो चलचित्रले सफलता पाउन सकेन। उनका लगातार १४ वटा चलचित्र फ्लव भएपछि सन २००४ मा ‘युवा’ले सफलता हासिल गरेको थियो।
यसपछि उनका ‘बन्टी और बब्ली’, ‘गुरु’, ‘धुम’, ‘सरकार’ जस्ता चलचित्र सफल भए पनि अरु चलचित्र भने असफल नै रहे।
उनी पिताको पाएको सफलताको नजिक पनि पुग्न सकेनन्।
एक्सना सुपरस्टार धर्मेन्द्रका कान्छा छोरा बबी देवलले पनि चलचित्रमा सफलता पाउन सकेनन।उनका दाई सन्नी देवलले बलिउडमा एउटा स्थान बनाए तर बबी भने अपेक्षा गरे अनुसार सफल हुन सकेनन। सन १९९५ बाट चलचित्रमा काम गर्ने शुरु गरेका उनले हाल सम्म ४१ वटा चलचित्रमा काम गरिसकेका छण्।
उनका ‘गुप्त, ‘सोल्जर’, ‘बादल’, ‘हमराज’, ‘दोस्तान’ लगायतका चलचित्रले मात्र सफलता पाउन सके। उनी औसत नायक भन्दा माथि जान सकेनन। जुन छवि प्रभाव उनका पिता धर्मेन्द्रको थियो उनको हुन सकेन।
३. तुषार कपुर
चर्चित बलिउड नायक जितेन्द्रका छोरा तुषार कपुरले पनि बलिउडमा सोचे अनुसारको नाम कमाउन सकेनन्। उनकी दिदी एकता कपुरले टेलिभिजन जगतमा ठुलो सफलता हासिल गरेकी छिन् । तर तुषारले पिताजस्तो स्थान बलिउडमा बनाउन सकेनन्। उनले सन २००१ मा चलचित्र ‘मुझे कुछ कहेना हे’बाट बलिउडमा प्रवेश गरेका थिए ।
४. लब सिन्हा
‘खामोश’ भनेरै बलिउडमा छाएका नायक शत्रुघ्न सिन्हाका छोरा लब सिन्हाले बलिउडमा कुकने कमाल देखाउन सकेनन्। उनले सन २०१० मा चलचित्र ‘सदियाँ’ बाट बलिउडमा पाइला त टेके तर यात्र त्यो भन्दा अगाडी बढ्न सकेन।
शत्रघ्न सिन्हाकी छोरी सोनाक्षीले भने बलिउडमा ठुलो सफलता पाइराखेकी छिन्।
सदाबहार नायक देव आनन्दका छोरा सुनील आनन्दले पनि बलिउडमा आफूलाई स्थापित गर्न सकेनन्। उनले ८० कै दशकमा ‘ आनन्द ही आनन्द’, ‘कार थीफ’,’मै तेरे लिए’ जस्ता चलचलित्रमा काम गरेका थिए तर कुनै पनि चलचित्रले प्रभाव छोड्न सकेनन्।
सन २००१ मा उनले निर्दैशकका रुपमा चलचित्र ‘मास्टर’मा काम गरेका थिए, उक्त चलचलित्रले उनलाई सफलता दिलाएन।
‘डिस्को डान्सर’का रुपमा बलिउडमा छाएका मिथुन चक्रवर्तिका छोरा महाअक्षयको बलिउड यात्राले कुनै गतिनै लिन सकेन। उनले बाबुको पद चिन्ह पछ्याउँदै सफलता हासिल गर्न सकेनन्। उनले सन २००८ मा चलचित्र ‘जिम्मी’बाट बलिउडमा प्रवेश गरेका थिए।
चर्चित नायक तथा निर्माता फिरोज खानका छोरा फरदिन खानले पनि बलिउडमा उल्लेखनिय सफलता पाउन सकेनन्।
फिरोजले फरदिनलाई चलचित्र ‘प्रेम अगन’बाट बलिउडमा लञ्च गरेका थिए। उनका केही चलचित्र सफल रहे पनि पिताको मृत्यपछी भने उनी बलिउडमा खासै देखिदैनन्।
गगन थापाले सुरू गरे नयाँ अभियान, शताब्दी पुरुषले गरे उद्घाटन
सावधान ! के तपाई बिहान खाली पेटमा चिया पिउँनुहुन्छ ?
प्रेमिका आलिया र एक्स दिपिकासंगै बसे फिल्मफेयर अवार्डमा पुगेका रणवीर, तस्बिर बन्यो भाइरल
बलिउडका यी ८ सुपरस्टार, जसले पाउदैनन् भारतको निर्वाचनमा भोट हाल्न !
कमाएको सम्पत्ति वृद्धाश्रमलाई दिएर बुढेसकाल उतै बिताउछु : दिपाश्री